အွန်လိုင်းငွေရှာ | Malaysia Magnum၊ Singapore Pools 4D ToTo Sweep
09-09-2018 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4DInSingapore သတင်း
ဖောက်သည်အများအပြားထံမှ အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များရရှိပြီးနောက်၊ ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ၎င်းတို့ကိုကူညီရန် ပိုများလာနေသောဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေ့သို့ခြေလှမ်းလှမ်းနေပါသည်။ ဟုတ်တယ်! ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ငွေရှာအွန်လိုင်းပရိုဂရမ်ကို ကမ်းလှမ်းနေပါသည်။ မြှင့်တင်ပါတော့မည်။ '4D in Singapore' ဝန်ဆောင်မှုများ အရောင်းရဆုံး။ ဤ 4D ဝန်ဆောင်မှုများ ဟော့ကိတ်မုန့်တွေလို ရောင်းတယ်။၊ အဲဒါကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
“ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုလျှင် Sgd $100 အထိ ရယူပါ။
အံ့သြဖွယ် 4D ခန့်မှန်းဝန်ဆောင်မှုများ"
လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ အပူတပြင်းလိုအပ်နေသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ်တွင် လေးနက်သောဝင်ငွေရရှိရန် အခွင့်အလမ်းကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ခဲသည်။
50% အထိ ကြီးမားသော အကျိုးအမြတ် ထပ်တလဲလဲ ကော်မရှင်များ။
3 လ ငွေအသင်းဝင်ခြင်း $50
3 လ ရွှေအသင်းဝင်ခြင်း $80
3 လ ပလက်တီနမ် အဖွဲ့ဝင်ခြင်း $135
Elite အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း။ $80
3 လ Elite အဖွဲ့ဝင်မှု $200
ဤမျှလောက်ရောင်းကောင်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အခြားမည်သူမျှ ကမ်းလှမ်းမည်မဟုတ်ပါ - ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်အသင်းဝင်အချို့ကဲ့သို့ သင်၏ရေရှည်ဝင်ငွေ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
4D ခန့်မှန်းမှု၏ ရှေ့ဆုံးတွင်ရှိနေသော တစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 4D Prediction Services သည် ထိပ်တန်းတွင်ရှိနေပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပ်ဒိတ်များနှင့် အသစ်၊ မြှင့်တင်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သုံးစွဲသူတစ်ဦးနှင့်ထိုက်တန်သည့် အကောင်းဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များသာ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအံ့သြဖွယ်အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် မကန်ပါနှင့်။
နောက်ဆုံးတော့, ဟော့ကိတ်မုန့်တွေလို ရောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ လှေပေါ်တင်ပြီး ပိုက်ဆံမရှာချင်ဘူး ။
သင့်အား အချိန်ပြည့် ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမက သင်အမြဲတမ်းမက်ဖူးသော မက်မောခဲ့သော ကရာတေးသင်ခန်းစာများကဲ့သို့ ကောင်းသော အားလပ်ရက်ခရီးများ ခရီးစဉ်များအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ဝင်ငွေတစ်ခုပေးပါ။
1) သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပထမဆုံး အခမဲ့ သို့မဟုတ် အခပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် စာရင်းသွင်းပါ။
2) သင့်အကောင့်ကို Login ဝင်ပြီး ကလစ်နှိပ်ပါ။ 'ဆက်စပ်အချက်အလက်'.
3) သင်၏ထူးခြားသော ရည်ညွှန်း url လင့်ခ်ကို ကူးယူပါ (ဥပမာ၊ လွှဲပြောင်းပေးသည့်လင့်ခ်သည် ဤကဲ့သို့သော အရာတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်။ https://4dinsingapore.com/amember/aff/go?r=3&i=1) နှင့် သင့်သူငယ်ချင်း/မေးလ်စာရင်းသို့ အီးမေးလ်ဖြင့် လင့်ခ်ကို ပေးပို့ပါ သို့မဟုတ် သင့်ဘလော့ဂ်/ဝဘ်ဆိုက်တွင် လင့်ခ်ကို တင်ပါ။
4) မည်သူ့ကိုမဆို လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး အကောင့်ဖွင့်သည့်အခါ၊ သူ/သူမသည် အသင်းဝင်အဖြစ်ရှိနေသရွေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ရည်ညွှန်းကော်မရှင်တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရောင်းချမှုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း သင့်ထံအကြောင်းကြားရန် အီးမေးလ်တစ်စောင် အလိုအလျောက် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။.
Sidenote- အကောင့်ဝင်သည့်အခါ၊ သင်၏စစ်ဆေးပါ။ စာရင်းဇယား သင့်အား အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။ ကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုအချက်အလက် ဒီမှာ
ပူးပေါင်းပါ။ အွန်လိုင်းငွေရှာပါ။ ယနေ့ အစီအစဉ်။
1) သင်၏အဖွဲ့ဝင်ခြင်းအတွက် "လျှော့စျေးပြန်အမ်းငွေ" ကိုခံစားရန် သင့်ကိုယ်သင် ရည်ညွှန်းပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းသွင်း၍မရပါ။ ဒီကိစ္စမှာ ကော်မရှင်က ပေးဆောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
2) ငွေပေးချေမှုကို ပထမဆုံးလက်ခံရရှိပြီး ရက်ပေါင်း 30 အကြာတွင် ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ပါမည်။
*စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။